नयाँ शृङ्खलाको थालनी- विचार - कान्तिपुर समाचार
जेष्ठ ८, २०७६ सीके लाल
काठमाडौँ — अक्षरलाई अनन्त, अनादि एवं अपरिमित सामथ्र्यको स्रोत भनिएको छ । शब्दलाई ब्रह्म एवं मानवीय स्मृति, कल्पना र चिन्तन प्रक्रियाको ऊर्जा तथा नादलाई यन्त्र मानिएको छ । त्यस्ता सबै मान्यताले भने शब्दको सम्प्रभुतालाई सर्वोपरी ठहर्‍याएका छन् । समस्या त्यसबेला सुुरु हुन्छ, जब शब्द आफैमा सार्वभौम शक्ति नभएर त्यसलाई अथ्र्याउने तागत एवं हिम्मत भएकाहरूको औजार बन्न पुग्छ ।
अवतारको अवधारणाले ईश्वरलाई नश्वर बनाइदिन्छ । आत्मा एवं परमात्माको बीचमा पैगम्बर तथा मसिहा आइपुग्छन् । धर्मगुरुले सत्य वाचन गर्ने एकाधिकार हत्याउँछन् । धर्मलाई कर्मकाण्डले बन्दी बनाउँछ । पुरेत प्रवर्गले पुण्य र पाप छुट्याउने ठेक्का लिन्छ । अनि शब्दको प्रभुसत्ता हराउँछ । हालसालै अंग्रेजी शब्दकोशको आधिकारिकता प्राप्त गरेको ‘पोष्ट ट्रुथ’ वा ‘उत्तर सत्य’ अवधारणाको बीज विभिन्न भाषाका शब्दहरूको चलायमान अर्थमा खोज्न सकिन्छ ।
उदाहरण पहिल्याउन ठाढा जानु पर्दैन । गोरखाका विजयी लडाकाले नेपाल एकीकरण गरेको कथ्य छ । महत्त्वाकांक्षी मुख्तियार भीमसेन थापाले भूमि गुमाएको संकथन स्थापित भएको छ । दुस्साहसी सिपाही जंगले देश फैलाएको कुरा छ । चतुर चन्द्रले सार्वभौमिकता कमाएको किंवदन्ती छ ।
राजा महेन्द्रले राष्ट्र जोगाएको भ्रम अद्यापि कायम छ । राजा वीरेन्द्र प्रजातान्त्रिक थिए भनिन्छ । उनले लामो कालसम्म प्रजातन्त्रवादीहरूलाई भने अराष्ट्रिय तत्त्वकै श्रेणीमा राखेका थिए । झापालीहरूले सर्वहाराको अधिनायकवाद ल्याउन व्यक्तिहत्याको राजनीतिलाई अँगालेका थिए । माओवादीले दिगो शान्तिका लागि नृशंस सशस्त्र द्वन्द्व सञ्चालन गरेको धेरै भएको छैन ।
सत्तासीनहरूले भ्रूण नै विवादित रहेको संविधानले सबै खाले द्वन्द्वको निरूपण गरेको दाबी गर्छन् । सरकारका तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि नेपाली राज्य एवं समाजका सबै खाले अन्तरविरोधको तार्किक अन्त्य भएको भाष्य निर्माण भइरहेछ । क्षणिक आनन्दका लागि तार्किकता परित्याग गर्ने प्रवृत्तिलाई अंग्रेजीमा ‘सस्पेन्सन अफ डिसविलिफ’ भन्छन् ।
एकछिनका लागि अविश्वासको स्थगन प्रक्रियालाई स्वीकार गर्ने हो भने नेपालमा अहिले अमनचैन छ । शब्दहरूको अर्थ शक्तिशाली व्यक्तिहरूको नियन्त्रणमा छ । शक्तिहीनका लागि शब्द कर्म कहिल्यै सहज हुँदैन । तर छनोट आफ्नै भएपछि तिनका सम्भाव्य असरका लागि तयार रहनुपर्छ ।
साक्षी भइरहनु पनि शब्द कर्मभन्दा सहज काम होइन । हिन्दु कर्मकाण्डमा दीयोलाई कर्म साक्षी बनाइएको हुन्छ । निभ्ला कि भन्ने भयले त्यसभित्र अतिरिक्त वर्तिकालाई नसल्काई राखिन्छ । अझ त्यसमाथि बोताको छाता ओढाइएको हुन्छ । कर्म साक्षी दीपनारायणले उज्यालो छर्दैनन् । तिनको काम फगत बल्नु र अन्तत: निभ्नु हो । सबै खाले सत्ताले कर्म साक्षी रूचाउँछन् । किनाराका साक्षीले पनि खासै केही गर्न सक्दैनन् । तिनको काम औँठाछाप लगाउनु हो । सत्तालाई विरोधको वैधानिकता प्रदान गर्ने किनाराका साक्षीहरूको भूमिका इतिहासको पादटिप्पणीमा दर्ज हुनेमात्रै हो ।
साक्षी त मानवशास्त्रीहरूले सहभागी अवलोकनकर्ता (पार्टिसिपन्ट अब्जर्भर) भन्ने गरेकाहरू पनि हुन् । तिनको दृष्टि मात्रले पनि वस्तुस्थिति बदलिन सक्छ । त्यसैले धेरैजसो सत्ताले सामान्यतया जिज्ञासु अनुसन्धानकर्मी, प्रतिबद्ध मानव अधिकारवादी, सचेत नागरिक समाज वा कर्तव्यनिष्ठ पत्रकारलाई मनपराउँदैनन् । तिनलाई आफ्नो अनुकूल बनाउन ज्ञानसत्ता, धर्मसत्ता, राज्यसत्ता एवं धनसत्ता कहिले एकआपसमा प्रतिस्पर्धा गर्छन् भने कुनै बेला सहकार्य पनि गर्छन् । पेसाधर्मी प्राध्यापक, संलिप्त प्राज्ञ (एन्गेज्ड ऐकडेमिक) एवं ऊर्जावान साहित्यकार तथा कलाकार आफैमा एक प्रकारको सत्ता हुने भएकाले ती फगत साक्षी भएर बस्न सक्दैनन् ।
ती अन्य सबै खाले सत्ताका कित विरोधी हुन्छन् वा प्रकारान्तरले सहयोगी । साक्षीहरूको शास्त्रीय प्रवर्गभित्र ‘शब्द साक्षी’ कता पर्न आउँछ ? स्पष्ट उत्तर दिन नसकिने प्रश्नको व्याख्या निरन्तर प्रयत्नद्वारा अभिव्यक्तिको पवित्रता, स्पष्टता एवं लालित्य कायम राखेर गर्न सम्भव हुनेछ । चुनौती चानचुने होइन ।
पत्रपत्रिकाका सम्पादकहरूलाई गुरुगम्भीर देखिने बाध्यता हुन्छ । गिरिलाल जैन भारतका प्रसिद्ध पत्रकार थिए । टाइम्स अफ इन्डियाको सम्पादक हुनु भारतीय प्रधानमन्त्रीपछिको दोस्रो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी हो भन्ने किंवदन्ती उनैको कार्यकालमा फैलिएको थियो । त्यस्तो दाबीलाई दोहोर्‍याएर प्रसिद्ध बनाउने श्रेय भने टाइम्स अफ इन्डियाकै अर्का दिग्गज सम्पादक दिलीप पडगाँवकरलाई दिने गरिन्छ ।
नयाँ भएन भने समाचार हुन नसक्ने हुँदा सम्वाददाताहरू निरन्तर नवीनताको खोजीमा रहन्छन् । विचार एवं दृष्टिकोण पानाका लागि लेख्नेहरू सामान्यतया आफ्ना विधाका विज्ञ एवं विशेषज्ञ हुन्छन् । टिप्पणी लेख्न समसामयिक वस्तुस्थितिबारे सामान्य जानकारी भए पुग्छ । स्तम्भ लेखकलाई भने त्यस्तो कुनै सीमाबद्धता लाग्दैन । सम्बन्धित विषयको विज्ञ भए राम्रो, तर समाज एवं राजनीतिको ‘विश्लेषक’ हुन कान र आँखा खुल्ला राखे पुग्छ ।
पत्रकारिताको कुनै पनि अनुशासनले सहजै बाँध्न नसकिने हुँदा अमेरिकी अखबार न्युयोर्क टाइम्सले स्तम्भकारलाई अदाकार (पर्फमर) मानेको छ । अदाकारको बाध्यता के हुन्छ भने तिनले कथाले मागेको चरित्र संँगसँंगै आफ्नो मौलिकता पनि प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ । सायद त्यही भएर होला, परम्परागत ढर्राका पत्रकार एवं शास्त्रीय सम्पादकहरूले स्तम्भकारलाई खासै मनपराउँदैनन् ।
नेपाली पत्रकारिताका अननुकरणीय सम्पादक (इनिमिटबल एडिटर) राजेन्द्र दाहालको भाषामा भन्ने हो भने कुनै पनि प्रकाशनले स्तम्भकार नियुक्त गर्नु भनेको आवधिक रूपमा तोकिएको शब्द असुल गर्नेगरी पत्रिकाको पानालाई खेतीयोग्य जग्गालाई ‘मनखप’ लगाए जस्तै हो । विडम्बना, स्तम्भकारको त्यही आवधिकता एवं अदाकारीले अखबारको पहिचान निर्माण गर्न पनि सघाउँछ । नागरिक पत्रकारिताको विस्फोटले गर्दा समाचार लगभग सित्तै अन्तरजालमाछ्यापछ्याप्ती उपलब्ध हुन्छ । विचार सस्तो हुन्छ भन्ने मान्यता यथार्थभन्दा भिन्न होइन । आम विचार (भक्स पप) एवं (अ)सामाजिक सञ्जालले अखबारी टिप्पणीको भूमिकालाई असान्दर्भिक बनाइदिएका छन् । स्तम्भको उपयोगितालाई गतिशील सम्पादकहरूले भने बढी रूचाउने रहेछन् ।
स्तम्भले नियमित परिवर्तनको परिवेशमा निरन्तरताको आभास दिन्छ । सायद त्यसैले होला, सम्पादक एवं सम्वाददाताका तुलनामा स्तम्भकारहरूको उलटफेर (टर्नोवर रेट) स्थापित प्रकाशन गृहहरूमा अपेक्षाकृत कम हुने गर्छ । तीन दशकमा तीनथरी प्रकाशन समूहसंँग जोडिएपछि स्तम्भकारको ताजा संलग्नता चौथो हो ।
लगभग तीन दशकसम्म हप्तैपिच्छे कम्तीमा एउटा स्तम्भ ‘उत्पाद’ गरिरहनु सहज काम होइन । उपयुक्त विषयको अभाव सधंैजसो महसुस भइरहन्छ । लामो कालसम्म स्तम्भ लेखिरहने व्यसनको रूचिकर पक्ष के हो भने कुनै पनि घटना वा प्रवृति नितान्त नौलो लाग्दैन । आजभोलि सार्वजनिक वृत्तमा तरंग मच्चाइरहेको मिडिया काउन्सिल विवादलाई अनावश्यक चर्चाको उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ ।
जनोत्तेजक प्रियतावादको सांघातिक आकर्षणले गर्दा स्वेच्छाले राज्यसत्ताका अगाडि लम्पसार परेको मिडियालाई ‘घुँडा टेकाउन’ कुनै नियम वा कानुन चाहिने होइन । साष्टांग मुद्रापछि झुक्ने ठाउँ नै रहँदैन । प्रस्तावित विधेयकमार्फत सत्तासीनहरूलाई नचाउने अल्पतान्त्रिक गिरोहले (अलिगार्किक क्लिक) भजनगायकहरूमा भय सिर्जना गरेर तिनको प्रतिबद्धता मजबुत बनाउन चाहेका मात्र हुन् ।
आलोचक तर्सिंदैनन् भन्ने तिनलाई थाहा छ । त्यसैले वैधानिक आतंकलाई परिमार्जनको प्रस्तावमार्फत सच्याउनेछन् । सच्चिन सक्ने सन्देश प्रवाहित गरेर सार्वजनिक वैधानिकताको नवीकरण गरिरहनु निर्वाचित अधिनायकवादको चरित्र हुने गर्छ । त्यस्तो राजनीतिक अस्त्रको प्रयोगमा नेकपा दोहोरोका पूर्वएमाले एवं पश्च माओवादीका कर्ताधर्ताहरूलाई कसैले सक्दैनन् ।
निजी कारण देखाएर नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका संयोजक पदबाट प्राध्यापक चैतन्य मिश्रले गरेको राजीनामालाई पनि त्यस्तै प्रत्युत्पादक बहस ठहर्‍याउन सकिन्छ । प्राध्यापक मिश्र विद्वानमात्र नभएर व्यावहारिक पेसाधर्मी पनि हुन् । निर्वाचित होस् वा अप्रत्यासित, सबै खाले अधिनायकवादको नोकरशाही व्यवस्थामा बौद्धिकको मूल जिम्मेवारी विद्वतापूर्वक सर्वेसर्वाको गुणगान गर्नु एवं कलात्मक तवरले सत्तासीनका गलत कामको ढाकछोप गर्नु हो भन्ने कुरा उनलाई कसैले सम्झाइराख्नु पर्दैन ।
काम्लोमा सातु मुछिसकेपछि घिनाउने विकल्प बाँकी रहने छैन भन्ने आहान उनले फगत सार्वजनिक खपत एवं आडम्बरी प्रदर्शनका लागि खडा गरिएको प्रतिष्ठान गठनकै बेला सम्झिएको हुनुपर्छ । उनले राजीनामाको कारण ‘निजी’ भनिसकेपछि त्यसका पछाडि मिनमेख निकाल्नु मुद्दाविहीन भएको बौद्धिक बहसका लागि अपेक्षाकृत हल्का प्रकरण निर्माण गर्नु मात्रै हो । सत्तावृत्तमा कृपापेक्षीहरूको कमी कहिल्यै हुँदैन । प्राध्यापक मिश्रको कुर्सी सम्हाल्न इच्छुक आधिकारिक बौद्धिकहरू नेकपा दोहोरो पंक्तिभित्र एकसेएक छन् ।
मुद्दाविहीन बनेको सार्वजनिक वृत्तले बजेटको चटपट अगाडि सर्वेसर्वा शर्मा ओलीलाई सोध्ने एउटा प्रश्न फेरि पनि ‘दासढुंगा प्रकरण’सँंग सम्बद्ध हुनसक्छ । मदन भण्डारी एवं जीवराज आश्रितको मृत्युपछि उत्पन्न राप र तापले गर्दा तत्कालीन एमाले संसदको सबभन्दा ठूलो दल बन्न पुगेको थियो ।
नौ महिनाका लागिमात्र भए पनि अल्पमतको एकमना सरकार चलाएको थियो । सर्वेसर्वा शर्मा ओली त्यस सरकारका गृहमन्त्री थिए । दासढुंगाको आन्तरिक रहस्यलाई गृहमन्त्रीबाट लुकाउन सकिँदैन । त्यसपछि एमालेले पटक-पटक सरकारको नेतृत्व गरेको हो । परराष्ट्र मन्त्री हुँदै दोस्रोपटक स्वयं शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका छन् ।
अब कित दासढुंगा प्रकरणका पछाडि उद्घाटन गर्नलायक कुनै रहस्य नै छैन वा छ भने त्यो कुरा सर्वेसर्वा ओली सार्वजनिक गर्न अनिच्छुक छन् भन्ने निर्णयमा पुग्नुपर्ने हुन्छ । खास कुरा के हो ? प्रश्न गर्न छाड्नु हुँदैन । मदन भण्डारीको अवसानपछि एमालेभित्र मौलाएको गुटगत राजनीति कुनै न कुनै रूपमा सत्तासिन गिरोहतन्त्रको उदयका लागि जिम्मेवार छ । माफ गर्नु मानवीय हो, तर विस्मृतिलाई कठिन रोगको लक्षण मानिन्छ ।
प्रकाशित : जेष्ठ ८, २०७६ ०८:४२
जेष्ठ ८, २०७६ सी चिनफिङ
यो साझा युगको सयौं हजार वर्षपहिले टिग्रिस र युफ्रेटस, इन्दुस र गंगा अनि एलो नदी र याङत्जेमा बसोबास गरेका हाम्रा पुर्खाहरूले जमिन खने र सिंचाइ गरे, औजार र भाँडाकुँडा बनाए, अनि बस्नका लागि घर बनाए ।
एकपछि अर्को पुस्ता गर्दै हाम्रा एसियाली पुर्खाहरूलेआफ्नो अथक प्रयासलाई सार्थक पार्दै समायानुकूल इतिहास अनि समृद्ध सभ्यताको निर्माण गरे । हाम्रा बृहत् र उर्वर जमिन, सुन्दर नदी प्रणाली, ठूला चौरहरू, मरुभूमि, ठूला नदी र महासागर र हिमालहरूले एसियाभर रंगीन र विविधतायुक्त सभ्यता निर्माणमा सघाएका छन् ।
सभ्यता निर्माणका क्रममा एसियाका मानिसले एकदमै ठूला उपलब्धिहरू हासिल गरेका छन् । मलाई लाग्छ, द बुक अफ सङ्स, कन्फ्युसियसको दर्शनको सँगालो, तालमड, एक हजार र एक रात, ऋग्वेद र गेन्जी मोनोगतारी जस्ता श्रेष्ठ साहित्य, पुराना लिपि, नक्सा, सिसा, अरबी अंक, कागज निर्माण र छपाइ प्रविधि अनि ग्रेट वाल, मक्का, ताज महलजस्ता ऐश्वर्यपूर्ण संरचनाहरू यसका उदाहरण हुन् । मानव सभ्यताका अमूल्य निधि हुन् यी । एक-अर्कासँगको अन्तरक्रियाका माध्यमबाट एसियाली सभ्यताले एकअर्कालाई समृद्ध बनाएका छन् भने विकासको महाकाव्य लेखेका छन् ।
एसियाका हाम्रा पुर्खाहरू धेरै पहिलेदेखि नै एकअर्काको सभ्यताको साटासाट र ज्ञान आदान-प्रदानमा संलग्न थिए । सिल्क रोड, टी रोड र स्पाइस रोडजस्ता प्राचीन व्यापार मार्गले रेसम, चिया, माटाका भाँडाकुँडा, मसला, चित्रकला र मूर्तिकलालाई एसियाभर नै विस्तार गरे । व्यापार तथा संस्कृति आदान-प्रदानका हिसाबले एकअर्काको सभ्यतासँग साक्षात्कार गरे ।
आज टु करिडोर एन्ड वान बेल्ट, युरेसिया इकोनोमिक युनियन र अन्य अभियानसहित बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभका कारण एकअर्काको सभ्यता साटासाट र सिकाइ बृहत रूपमा फैलिएको छ । विज्ञान, प्रविधि, शिक्षा, संस्कृति, स्वास्थ्य र जनता-जनता बीचको सहकार्य फस्टाउँदो छ ।
विश्व सभ्यतामा एसियाली महान् सभ्यताको विशेष स्थान छ । यसले मानव सभ्यतामा विविधता थपेको छ । एसियाको धर्म, दर्शन, नैतिक आचरण, कानुन, साहित्य, चित्रकला, नाट्य अनि गाउँ-सहरका भवनहरूले विश्वमा के योगदान दिन सक्छन्, सोचौं । यिनले एसियाको सामाजिक रीतिथिति, अजम्बरी, श्रेष्ठ र उत्कृष्ट कलाको गौरवमय उपलब्धिको आयतनबारे जानकारी दिन्छन् । यिनले विश्व सभ्यतालाई समृद्ध विकल्प प्रदान गर्छन् ।
हाम्रा विगतको समीक्षा गर्दै एसिया बाहिर हेर्दा हाम्रो सभ्यताले ठूलो आत्मविश्वास दिन्छ । हामीले पुर्खाहरूको समृद्ध सम्पदालाई आकार दिन सक्छौं, अन्य सभ्यतासँग सहकार्य गर्न सक्छौं र आपसी सिकाइलाई बढावा दिन सक्छौं । यसो गर्दै हामीले एसियाली सभ्यतामा नयाँ कीर्ति थप्न सक्छौं ।
हामी एसियाली देशहरू निकट छौं र आत्मीयताको प्राकृतिक बन्धनमा बाँधिएका छौं । हामी एउटै ऐतिहासिक कालखण्डबाट गुज्रियौं र भविष्यका लागि एउटै सपना साँचेका छौं । अझ भन्नुपर्दा, विश्व कता गइरहेको छ भनी हामीले हेक्का राख्नुपर्छ, समयको शैलीमा हिँंड्नुपर्छ र समृद्ध जीवन जिउने हाम्रा जनताको चाहनालाई यथार्थमा परिणत गर्नुपर्छ ।
हामी एसियाभर शान्ति र स्थायित्व चाहन्छौं । शान्ति कायम राख्नु हरेक देशको दायित्व हो । जब द्वन्द्व र युद्धले शान्ति अवरोध हुन्छ, तब आर्थिक वृद्धि, सभ्य जीवन, सामाजिक स्थायित्व र जनता बीचको सम्बन्धमा पनि खलबलिन्छ । हामी एसियाका जनता त्रासबिना खुसी र सुरक्षित अवस्थामा बाँच्न र काम गर्न चाहन्छौं । हामीलाई आशा छ, सबै देशले एकअर्कालाई सम्मान र विश्वास गर्नेछन्, हामी ऐक्यबद्ध भए बस्नेछौं र सीमा, समय र स्थान साथै मानवीय सभ्यतामा भएको भिन्नताको सम्मान गर्नेछौं । हामीले शान्तिका लागि ऐक्यबद्ध भएर काम गर्नुपर्छ, किनकि कहिलेकाहीँ यो सुनभन्दा पनि मूल्यवान हुने गर्छ ।
हामी एसियामा साझा समृद्धि चाहन्छौं । आर्थिक वृद्धिले सभ्यतालाई सघाउँछ र समृद्धिले देशको प्रगतिलाई बलियो बनाउँछ । एसियाका केही भागका जनता, महिला र विशेष गरी बालबालिकाहरू अहिले पनि गरिबी, भोकमरी र रोगबाट प्रताडित छन् । यो अवस्थाको अन्त्य हुनैपर्छ । हामी गरिबीरहित सभ्य जीवन चाहन्छौं । हामीलाई आशा छ, देशहरूले आर्थिक विश्वव्यापीकरणको प्रवर्धनको लागि सहकार्य गर्नेछन् र यसलाई अझ बढी खुला, समावेशी, सन्तुलित र सबैका लागि लाभदायक बनाउनेछन् । यसले गर्दा केही देशमा व्याप्त गरिबी र पछौटेपन निवारणका लागि सहयोग पुग्नेछ । यसले हाम्रा सन्ततिलाई चिन्तामुक्त र हाम्रो परिवारलाई खुसी तुल्याउनेछ ।
हामी खुला र जोडिएको एसिया चाहन्छौं । पछिल्ला दशकमा भएको एसियाको तीव्र विकासले के देखाउँछ भने बाहिरी विश्वका लागि ढोका खुला गर्नु र विश्वव्यापी आर्थिक विकासको शैली पछ्याउनु महत्त्वपूर्ण छ । यदि देशहरूलेआफ्नो ढोका बन्द गर्ने र आफैंमा हराउने विकल्प छाने भने मानव सभ्यता एकअर्काबाट विच्छेद हुन्छ र सबै सामथ्र्य हराएर जान्छ । हामीलाई के आशा छ भने सबै देशले निषेध त्याग्नेछन् र एकता, खुलापन र प्रवर्धनको नीति साथै पूर्वाधार, व्यापार र आर्थिक तथा जनता बीचको सम्पर्क प्रवर्धनका नीति अंगीकार गर्नेछन् । यस हिसाबमा हामीले हाम्रो एसियाली समुदाय र मानवीयताको भविष्य संवर्धन गर्न सक्छौं ।
विविधताले सभ्यताहरू बीचको अन्तरक्रियालाई बढावा दिन्छ, जसका कारण आपसी सिकाइ र भविष्यको विकासको प्रवर्धन हुन्छ । हामीले विश्वभरका देश, राज्य र संस्कृतिहरू बीचको सहकार्य र आपसी सिकाइको प्रवर्धन गर्नुपर्छ, एसिया तथा मानवताको भविष्यका लागि साझा भविष्य तय गर्नुपर्छ । मलाई लाग्छ, यसका लागि हामीले निम्नानुसार काम गर्नुपर्छ :
पहिलो, हामीले एकअर्कालाई सम्मान गर्नुपर्छ र समान व्यवहार गर्नुपर्छ । सबै मानिसको आफ्नै फरक सांस्कृतिक वातावरण हुन्छ । हरेकसँग आफ्नै देश र राज्य अनुसारको ज्ञान र दृष्टिकोण हुन्छ र हरेकका लागि त्यो विशेष हुन्छ । जसरी मानिसहरू छालाको रंग र भाषाका आधारमा फरक हुन्छन्, त्यसरी नै सभ्यताहरू पनि फरक हुन्छन् । कुनै पनि सभ्यता अर्कोभन्दा माथि हुन्न । कुनै जात र सभ्यता अर्कोभन्दा ठूलो हुन्छ भन्नु मूर्खता हो ।
यदि सबै सभ्यतालाई एउटै रंगरूपमा ढाल्ने हो भने यो विश्व बस्नका लागि एकदमै निरस हुन्छ । हामीले गर्ने भनेको एकअर्कालाई समान सम्मान र पूर्वाग्रहको त्याग हो । एसियाली सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण, संवर्धन र हाम्रो सभ्यताको दिगोपनाका लागि अन्य देशसँग काम गर्न चीन तयार छ ।
दोस्रो, विश्वभरका सभ्यता र विविधताको हामीले सम्मान गर्नुपर्छ । हरेक सभ्यता मानव सिर्जनाको परावर्तन हो र हरेक सभ्यता आफ्नै विशेषताका कारण सुन्दर छ । सभ्यताहरूले एकअर्कासँग प्रतिस्पर्धा गर्नु आवश्यक छैन । हामीलाई हरेकमा सुन्दरता देख्ने आँखाचाहिँ चाहिएको छ । हामीले हाम्रै सभ्यतालाई गतिशील राख्नुपर्छ र थप फैलिने वातावरण प्रदान गर्नुपर्छ । हामी सबै मिलेर विश्व सभ्यताको बगैंचालाई रंगीन र चलायमान बनाउन सक्छौं ।
अहिले धेरै देशका सांस्कृतिक कलाहरू चीन भित्रिइरहेका छन् र अन्य धेरै देशले पनि चिनियाँ सांस्कृतिक सामग्रीहरू भित्र्याइरहेका छन् । एसियाका राम्रा कलाहरू चिनियाँ भाषामा र चिनियाँ भाषाबाट अन्य भाषामा अनुवाद गरी प्रवर्धन गर्न पाएकामा चीन निकै खुसी छ । यसले एसियाली जनतालाई एकअर्काको संस्कृतिबारे बुझ्न सघाउँछ ।
तेस्रो, हामी खुला, समावेशी र एकअर्काको सामथ्र्यमा आकर्षित हुनुपर्छ । हाम्रा जीवित अंगहरूले मेटाबोलिजम प्रक्रियाद्वारा आफूलाई पुनर्जागृत गर्नुपर्छ, नत्र हाम्रो जीवनको अन्त्य हुन्छ । यो नियम सभ्यताको हकमा पनि लागू हुन्छ । लामो समय एक्लिँंदा सभ्यताको अन्त्य हुन्छ, जबकि आपसी सहकार्य र सिकाइले यसको विकासलाई कायम राख्छ । एउटा सभ्यता अर्को सभ्यतासँगको सहकार्य र सिकाइबाटै हुर्किन्छ । यस्ता सहकार्य र सिकाइ पारस्परिक, विविधतायुक्त र बहुआयामिक हुनुपर्छ, नकि बलजफ्ती, एकोहोरो र एकतर्फी ।
हामीले खुला सोच राखी सांस्कृतिक सहकार्यमा हुने सबै खाले अवरोध हटाउनुपर्छ । हामी समावेशी हुनुपर्छ र आपसी सहकार्यमार्फत एसियाली सभ्यताको विकास गर्न अर्को सभ्यताबाट पनि बल प्राप्त गर्नुपर्छ ।
सभ्यताहरूबीच सहकार्य र सिकाइका लागि मानिसहरू नै सबैभन्दा उत्कृष्ट सेतु हुन् । पछिल्ला वर्षहरूमा चीनले अन्य देशसँग सहकार्य गरिरहेको छ र शिक्षा, संस्कृति, खेलकुद, स्वास्थ्य र अन्य क्षेत्रमा सहकार्यका लागि विभिन्न माध्यम बनाएको छ ।
चौथो, हामी समयसँगै परिष्कृत हुनुपर्छ र विकासको नयाँ आधार तय गर्नुपर्छ । कुनै सभ्यता टिकाउनुछ भने यसलाई जीवित राख्ने प्रयास हुनुपर्छ । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, जुनसुकै सभ्यताले आफूलाई नयाँ समय अनुकूल बनाउनुपर्छ । विश्व सभ्यताको इतिहासले पनि हामीलाई यही सन्देश दिन्छ । नयाँ सोचसहित हाम्रो सभ्यताको विकासमा ऊर्जा र प्रेरणा भर्नुछ, जसले सभ्यताको आकर्षणलाई जीवित राख्छ ।
मानिसको अन्वेषण र सिर्जनाशीलता वृद्धिका लागि सबैभन्दा उत्तम उपाय भनेको फरक-फरक सभ्यतासँगको सम्पर्क गर्नु, उनीहरूको सामथ्र्य थाहा पाउनु र त्यसप्रति आकर्षित हुनु नै हो । गत वर्षमात्रै अन्य देश पुग्ने चिनियाँ पर्यटकको संख्या १६ करोड थियो भने १४ करोड विदेशीले चीन भ्रमण गरे । यस्ता भ्रमणले ज्ञान र सीपको आदान-प्रदानमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छन् ।
एसियाली सभ्यताको एक हिस्सा भएकाले चिनियाँ सभ्यताले यसको सुरुआती दिनदेखि नै परिवर्तन आत्मसात् गरेको छ । कागज, बारुद, छपाइ र कम्पास सम्बन्धी चिनियाँ आविष्कारको विश्वव्यापी प्रभाव छ र यिनले मानव सभ्यताको विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन् । अन्य सभ्यतासँगको सहकार्यबाटै चीनले यो यात्रा तय गरेको हो ।
चीनका राष्ट्रपति चिनफिङले बेइजिङमा आयोजित ‘कन्फ्रेन्स अन डायलग अफ एसियन सिभिलाइजेसन्स’ को उद्घाटन सत्रमा मे १५ मा दिएको मन्तव्यको अनुदित र सम्पादित अंश ।
प्रकाशित : जेष्ठ ८, २०७६ ०८:३९